Hoggaamiyaha Kooxda Daacish oo la hadal-hayo inuu geeriyooday.
Hoggaamiyaha Kooxda Daacish, Abu Bakar Al-baqdaadi ayaa la hadal hayaa inuu geeriyooday, wuxuuna shakigaasi yimid markii Saraakiisha Daacish lagu amray inay ka soo qeyb galaan Shir ka dhacayo gudaha dalka Iraq, oo lagu dooranayo qofkii bedeli lahaa Abu Bakar Al-baqdaadi.
Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegayo in lagu dilay hawlgalladda ka socda gudaha magaalladda Mosul ee Waqooyiga Iraq.
Hay’adda La-socodka Xuquuqda Aadanaha dalka Syria ayaa laga soo xigtay in Shirkaasi lagu amray inay ka soo qeyb galaan dhamaan Saraakiisha sarsare ee Kooxda Daacish.
Wargeyska The Jersusalem Post ayaa qoray warkaasi, inkastoo aan la xaqiijin karin sababta ay Kooxda Daacish u doonayaan inay Abu Bakar Al-baqdaadi u bedelaan, inkastoo la hadal hayo in lagu dilay weerarka ka socda Mosul.
Sidoo kale, ma kala cadda inuu weli nool yahay iyo meesha rasmiga ee uu ku dhuumaalaysanayo.
Bishii la soo dhaafay, Abu Bakar Al-baqdaadi waxa uu baahiyey Farriin Maqal ah, wuxuuna Dagaalamayaashiisa ku booriyey inaysan dib uga guranin xuduudka ay joogaan ee ay dagaalladda ka socdaan.
Bishii October waxaa la soo weriyey Hoggaamiyaha Daacish inuu aad u il daran yahay, kadib, markii uu cunay cuntada sumaysan oo lagu khaarijin lahaa.
Abu Bakar Al-baqdaadi iyo 3 ka tirsan Hoggaaminta Daacish ayaa ku xanuunsanayd cuntada sumaysan ee ay ku cuneen Degmadda Beej ee K/galbeed Gobalka Nineveh.
Ilo laga soo xigtay Wakaalladda Wararka ee Iraqi News Agency ayaa sheegay in Saraakiishaasi loo gudbiyey goob aan la aqoonin oo lagu daaweynayo.
Warbaahino kale oo ka hawlgala gudaha dalka Iraq ayaa qoray in Hoggaamiyaha Kooxda Daacish, Abu Bakar Al-baqdaadi uu 150 La-hayste, kana baxsaday magaalladda Mosul si uu uga badbaado Duqeymaha Diyaaradaha.